Taageerayaal Careeysan Oo Looga Baqayo Iney Caqaladeeyaan Kulanka Maanta Ee United Iyo Reds – Garsoore Sports
Taageerayaal Careeysan Oo…
Manchester United ayaa ka walwalsan qaadicista ka soo horjeeda qoyska gacanta ku haya milkiyada kooxda ee Glazers oo la qorsheeyay axadda inay isku daydo inay carqaladeyso kulanka Liverpool, ilo wareedyo ayaa u sheegay Warbaahinta.
Qiyaastii 10,000 oo taageerayaal ah ayaa la filayaa inay banaanbax ka dhigaan banaanka Old Trafford ka hor marka kooxdooda ay soo dhoweyneyso dhiggooda Liverpool.
Carrada Tageerayaasha ayaa timid kaddib isku daygii fashilmay ee kooxda oo ay ugu biirtay koobka muranka badan ee European Super League.
Ammaanka agagaarka garoonka ayaa la adkeeyay, balse waxaa la sheegayaa inay jirto cabsi ah in si ay u helaan fiirro gaar ah ay taageerayaasha qaar isku deyi doonaan in cayaartooyda iyo macalimiinta ay ka horjoogsadaan inay galaan garoonka si ay isagu deyaan inay cayaarta dib ugu dhiggaan amaba ay u qasbaan in kulankan la baajiyo.
Tababaraha kooxda United Ole Gunnar Solskjaer ayaa taageeray xaqa ay u leeyihiin taageerayaashu inay mudaharaadaan laakiin wuxuu ku booriyay inay si nabad ah u sameeyaan.
Naadiga ayaa sidoo kale la sheegay inay ‘badbaadin’ dheeraad ah u fidisay saraakiisha fadhigoodu yahay meel ka baxsan magaalada Manchester, iyadoo laga cabsi qabo in dibbadbaxyadu ay ka sii gudbaan woqooyiga-galbeed ee magaalada.